Yesaia 31 | Intanɛt so Bible | Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
31 Wɔn a wɔkɔ Egypt kogye mmoa+ no nnue. Wɔn na wɔde wɔn ho to apɔnkɔ kɛkɛ so+ na wɔde wɔn werɛ hyɛ nteaseɛnam mu,+ efisɛ ɛdɔɔso; na wɔn ani da apɔnkɔ a wɔn ho yɛ hare so, efisɛ wɔn ho yɛ den. Na Israel Kronkronni no de, wonhuu no, na Yehowa de, wɔnhwehwɛɛ n’akyi kwan.+ 2 Ɔno nso nim nyansa,+ na ɔde amanehunu bɛba,+ efisɛ ɔntwee n’asɛm nsanee.+ Ɔbɛsɔre atia nnebɔneyɛfo fie+ ne mmoa a amumɔyɛfo hwehwɛ no.+ 3 Hwɛ, Egyptfo no yɛ nnipa,+ wɔnyɛ Onyankopɔn; na wɔn apɔnkɔ no nso yɛ honam,+ ɛnyɛ honhom. Yehowa bɛteɛ ne nsa na ɔboafo awatiriw, na nea wanya mmoa no ahwe ase.+ Wɔn nyinaa awiei bɛba prɛko. 4 Nea Yehowa aka akyerɛ me ni: “Sɛnea gyata pa so na gyatanini+ bobom bere a wakyere aboa, a nguanhwɛfo pii nteɛteɛm mmɔ no hu, na wɔn dede mmrɛ no ase no, saa ara na asafo Yehowa bɛba abɛko ama Bepɔw Sion ne ne koko no.+ 5 Asafo Yehowa bɛko ama Yerusalem te sɛ anomaa a watu nam wim.+ Ɔbɛko ama no, obegye no;+ ɔbɛkora no so, ɔbɛma wanya ne ti adidi mu.” 6 “Israel mma, monsan mmra+ nea mosɔre tiaa no+ no nkyɛn. 7 Saa da no, obiara bɛtow ne dwetɛ anyamehunu ne ne sika anyamehuhuw+ a mode mo nsa ayɛ a awie mo bɔne no agu.+ 8 Na Asiriani no bɛtɔ nkrante ano, nanso ɛnyɛ onipa de; na nkrante a ɛnyɛ ɔdesani de bɛsɛe no.+ Na nkrante no nti, obeguan, na wɔde ne mmerante bɛyɛ nkoadwuma. 9 Na ne botan no de ehu betwam akɔ, na ahyɛnsode+ no nti ne mpanyimfo koma betu.” Yehowa a ne hann wɔ Sion na ne fononoo+ wɔ Yerusalem no anom asɛm ni.